11 Dzakasiyana Nzira Vanhu Vanopindura Kushushikana & Kunetseka - Pfungwa
11 Dzakasiyana Nzira Vanhu Vanopindura Kushushikana & Kunetseka
Une bvunzo huru iri kuuya here? Zvichida kuongororwa kubasa? Kana kuti pamwe mwana wako ane chirwere chakakomba, kana iwe uri kusangana nedambudziko remari. Kunyangwe zvihombe kana zvidiki, zviitiko muhupenyu hwedu zvinogona kutishungurudza uye kunetseka.
Isu tese tinosangana nekushushikana muhupenyu hwedu. Hazvinzvengeki. Dzimwe nguva kushushikana kunogona kuita kwenguva pfupi, uye dzimwe nguva kunonamira kwenguva yakareba. Pfupi-yenguva kushushikana kunogona dzimwe nguva kuve chinhu chakanaka. Zvinogona kuita kuti titore danho rekugadzirisa uye kugadzirisa mamiriro edu ezvinhu. Yenguva refu kushushikana, zvisinei, haina hutano uye inogona kutora zvakanyanya kukuvadza pamiviri yedu nekufamba kwenguva.
Isu tese tinoita nenzira dzakasiyana kushushikana, uye hapana kuita kumwe chete kunganzi 'kwakanaka.' Iri rinotevera runyorwa rwemaitiro atingangosangana nawo (kazhinji mumubatanidzwa wakasiyana) kana tichisangana nekushushikana muhupenyu hwedu:
Kushungurudzika kunotanga kukanganisa pfungwa dzedu, uye maitiro acho anowanzo kuve emanzwiro. Maitiro akadaro anogona kuve akanaka kana asina kunaka zvichienderana nemunhu uye chiitiko chaicho chinokonzera kushungurudzika. Mhinduro dzinogona kubva pakusuwa kana kutsamwa kusvika kutsva kutsva uye kurudziro.
Kune angangoita ese anodzvinyirira, kusagadzikana kunowanzoitika. Kunyangwe kunetseka kuri kushoma (zuva rekutanga) kana kukuru (kurasikirwa nebasa), munhu wese anogona kutarisira kunzwa kunetseka zvishoma pasi pemamiriro ezvinhu. Kuzvidya mwoyo kunowanzoitika (kunyangwe iyo, zvakare, inogona kubuda paruoko) uye inogona kukanganisa vanhu zvese zvakanaka uye zvisina kunaka.
Vanhu vanoona kushushikana kubva kune chimwe chinhu chakakura uye kupfuura kwavanogona kudzora (sekufirwa nenhengo yemhuri) vanogona kushushikana nekuda kwekushushikana. Ivo vanogona kuwira mune kubatwa kwepfungwa kana kunetseka kugamuchira izvo zvinovatarisana nazvo. Nekuda kweizvozvo, ivo vanoenda zvishoma nezvishoma kudzika mukusuwa kusvikira zvabata hupenyu hwavo hwese. Kushungurudzika kunogona kuve chirwere chakakomba chepfungwa icho dzimwe nguva chinoda kurapwa kwenyanzvi.
3. Kuwedzera Positivity
Zvichienderana nemunhu uye huwandu uye mhando yekushushikana, mhedzisiro yekuita manzwiro maitiro anogona kunge ari akanaka. Zvimwe vanhu vakagadzikana mupfungwa pindura kushushikana nekuwedzera kutarisisa kwavo uye nekutsvaga mhinduro kudambudziko remidzi. Ivo ramba uine tariro uye tarisa maitiro ekugadzirisa chiitiko chinonetsa. Izvi zvinowanzoitika mune zvenguva pfupi-zvinonetsa, asi zvinogona kuwanikwa mune vamwe vanhu zvisinei kuti chii chinoitika kwavari. Vanhu vanogona kunyatsozvirovedza kuti varambe vane tariro uye voita chiito chakavakirwa kana mamiriro akashungurudza akabuda.
Mushure mekunge pfungwa dzedu dzasangana nemanzwiro, isu tinowanzo tevera nehunhu. Izvi zvinonyanya kuitika kana munhu akasangana nekusingaperi kushushikana.
4. Kupindwa muropa
Doro nemidzanga zvinopa zororo kwenguva kubva kumamiriro ezvinhu anonetsa, saka zvinogona kuve zvakajairika kune avo vari kunetseka kuti vatendeukire kune izvi zvinobatsira senzira yekurarama. Nekuti zvinhu izvi zvinonyanya kupindwa muropa, zvakajairika kuti vanhu vapindwe muropa. Zvinogona kutanga nekutyora kuvhura doro kana kuvhenekera mushure mezuva rinonetsa, uye kukura nekukura kusvikira zvisingakwanisike kuti munhu arambe. Imwe 'gadziriso' yakajairika kune avo vanosangana nekushushikana ishuga uye zvisina hutano chikafu chekudya.
Vamwe vanhu vanoita kunetseka nehasha. Ivo vanogona kupa vamwe mhosva yechiitiko chinonetsa, kana vangangodaro vasingazive maitiro ekugadzirisa chiitiko pasina hasha. Kana iwe wakamboona mumwe munhu achibaya pamadziro kana kupopota pasina chikonzero chiri pachena, zvinogona kunge zviri kuita kunetseka kune imwe mhando. Hasha dzinogona kuve diki uye diki, kana dzinogona kushanduka kuita kazhinji kusagadzikana kwemamiriro ekuchinja . Vanhu vanogona kuita hukasha nekushusha kune vamwe, kana kutogona kuzvikuvadza ivo pachavo nekuda kwekumanikidzwa uku.
Kushungurudzika kune simba rakakura pauropi hwako, uye, semhedzisiro, zvinogona kuve zvakaoma kudzima husiku. Izvi zvinoita kuti kushaya hope kuve kwakajairika kuitika pakati pevanhu vakashushikana. Kana mwenje wadzimwa, uye vanhu vari voga murunyararo rwehusiku, kushushikana kunogona kukonzera kuti pfungwa dzavo dzisimbe kubva mukutonga zvakanyanya kupfuura masikati.
7. Kutadza Kuramba Wakamuka
Nepo vamwe vanhu vasingaratidzike kunge vachikotsira, vamwe vanogona kusangana neakapesana chaizvo. Nekuti uropi hwavo huri kushanda nguva yakawandisa nekuda kwekushushikana kwese nekushushikana, vanogona kunetseka kuramba vakamuka, kunyanya masikati.
Kuzviremekedza uye kuvimba kunowanzo rova ​​kana mumwe munhu achishushikana kwenguva yakareba. Vanogona kusatenda mukukwanisa kwavo kurarama nemagariro, saka vanotanga kuzvivharira nekuzviparadzanisa.
Haasi ese mhinduro dzedzvinyiriro maitiro. Kushungurudzika kunogona kuita chaiko pamiviri yedu uye kuratidza sezviratidzo zvemuviri. Pfungwa nemuviri zvinowanzoenderana, saka kana pfungwa dzichitambura, muviri uchatamburawo. Pazasi pane mishoma mienzaniso yezviratidzo zvekutaura-kuti mumwe munhu ari kushushikana nepfungwa.
9. Kutemwa nemusoro
Zvinonzwisisika kuti munhu ane kushushikana kwakawanda aigona kutemwa nemusoro. Uropi hunogara hwakangwarira zvakanyanya kana uchinge uchinetseka. Izvi zvinogona kukonzera kukakavara uye, zvichidaro, kutemwa nemusoro uye migraines.
10. Tsandanyama Aches
Paunorohwa neshungu, mhasuru dzako dzinozvomarara. Kushushikana kwemhasuru chinhu chinowanzoitika pakushushikana nekuti imuviri wako kuzvidzivirira pakukuvara. Nekusingaperi kushushikana, zvakadaro, mhasuru dzinoramba dzakatsamwa uye dzinogona kudzikisira kana kusimbisa kumusoro nekufamba kwenguva, zvichikonzera marwadzo uye kuderera kwekufamba.
11. Kukuvadza Kwemuviri
Anenge chero chikamu chemuviri chinogona kukanganiswa nekushushikana - zvese zvemukati nekunze. Kubva pane nyaya dzemudumbu kusvika kumatambudziko emhasuru, kushushikana kunogona kukonzera zvese. Kushungurudzika kunogona kukanganisa chiratidzo chako kana kugona kwako kufema zvakasununguka. Iyo inogona kukanganisa yako sisitimu, moyo wako, uye yako yekubereka system. Kushungurudzika kunogona kuve nemhedzisiro isingadzoreke pamuviri wako kana iko kuita kwekushushikana kuri kuenderera kana kusingaperi. Kushungurudzika kunogona, mune dzimwe nguva, kuve kunouraya.
Kunyange hazvo kusiri kushushikana kwese kwakaipa, kuratidzwa kwenguva refu kushushikana kusingagumi kunogona kukanganisa pfungwa nemiviri yedu. Inogona kuchinja hupenyu hwako hwese uye kukanganisa vanhu vakakukomberedza, kusanganisira avo vaunoda. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchiona izvo zveimwe yezviratidzo zviri pamusoro (kana musanganiswa wazvo), unogona kunge uri kupindura kunetseka. Kunyangwe kushushikana kusingadzivisike, iwe unofanirwa kuziva mhinduro dzako dzakasarudzika kunetseka uye kuziva nguva yekutora kugadzirisa.
sei kusataura zvakanyanya kudaro
iyo haisi kubaya ndiwo mufananidzo wekubaya
sei manzwiro achichinja muhukama
kuita sei nemurume anozvifunga
kufara sei muhupenyu zvakare